Manoloana ny adihevitra fa tokony hisy fakan-kevitra eny amin'ny antenimierampirenana mialoha ny fikasana hanova lalam-panorenana dia notsipihin'ny mpitondra tenin'ny governamanta fa efa nomen'ny solombavambahoaka fahefana feno hanova lalàna amin'ny alalan'ny didy hitsivolana ny filohan'ny Repoblika nialoha ny nahataperan'ny fe-potoam-piasan'ireo mpikambana teny anivon'ny antenimierampirenena. Manaraka ny fepetra rehetra voalaza ny lalàna arak'izany ny hanatanterahina fitsapakevibahoaka ny 27 mey izao.
Tsy ilana 90 andro
Raha momba ny fiantsoana ny mpifidy, araka ny andiany faha 51 ao amin'ny lalana fehizoro 2018-008 mamaritra ny fifidianana ankapobeany sy ny fitsapakevibahoaka, ny fifidianana olona voafaritry ny fe-potoam-piasana ihany no tsy maintsy hiantsoana ireo mpifidy 90 andro mialoha ny hanatanterahina ny latsabato. Tsy voakasik'io fe-potoana io kosa ny fifidianana fitsapakevibahoaka.
Ny andininy faha-56 ao anatin’io lalana io ihany koa no milaza fa 30 andro ny fe-potoana hanatanterahina fampielezan-kevitra ho an’ny fitsapakevibahoaka. Raha ireo voalazan’ny lalàna ireo no jerena, voahaja tsara ny fepetra takian’ny lalàna ny hanatanterahina fitsapakevibahoaka ny 27 mey izao.
Voafaritra ao amin'ny andininy faha 161 ny lalam-panorenana fa afaka atao ny manova ny lalam-panorenana raha misy ny antony manokana tena ilaina izany.
Hamafisin’ny andininy faha-162 ao anatin’ny lalam-panorenena ihany fa manana fahefana feno handray fanapahan-kevitra hanova ny lalam-panorenana ihany koa ny filohan’ny repoblika, fanapahan-kevitra raisina mandritra ny filankevitry ny ministra.
Raha ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny governemanta, ho ampahafantarina ny vahoaka malagasy afaka fotoana fohy ireo pitsopitsony amin'ireo andinin-dalana ho hikitihina ao anatin'ny lalam-panorenana izay ho akana ny hevitry ny vahoaka malagasy ny 27 may izao.